KANDIDA NAINA ANDRIANTSITOHAINA : Nidina ifotony nijery ny olan’ny mpivarotra tetsy Analakely
Mitohy hatrany ny famahana ny olan’ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina ho an’ny Kandida laharana fahefatra, Naina Andriantsitohaina. 25 octobre 2019
Nidina ifotony tao amin’ny tsenan’ Analakely izy sy ireo kandida mpanolotsaina miaraka aminy, omaly. Tahaka ny fanaony tamin’ny faritra rehetra efa nolalovany dia nisy ny fihainoany ny hetahetan’ny mpivarotra sy ny mponina ao amin’ny Boriborintany voalohany tafaresaka taminy.
Nangatahan’ny mpivarotra eny an-toerana nandritra ny fihaonana ny tokony hametrahana fandaminana vaovao mahakasika ny tsena eo Analakely sy ny manodidina. Gaboraraka tanteraka ny fitantanana io tsena io, raha ny nambaran’ireo mpivarotra satria tsy misy fandaminana maty paika mihitsy hatramin’izay napetraky ny mpitantana ny tanàna ankehitriny. Mitohana tanteraka ny lalana vokatr’io fitantanana tsy mahomby io ary samy mizaka ny vokany avokoa ny rehetra.
Tokony havahana tsara koa ny tsena sy ny lalan’ny fiara ary ny lalan’ny mpandeha an-tongotra mba hampilamina ny fifamezivezena, hoy ny mponina sy ny mpivarotra.
Nangatahan’ireto farany koa moa ny tokony hampitoviana ny mpivarotra rehetra. Mitaraina mantsy ny mpivarotra manara-dalàna ao amin’ny “Pavillon” Analakely satria maro loatra ny mpivarotra sasasantsasany tsy manara-dalàna mivarotra eo anoloan’ny tsenan’izy ireo. Nilaza ny kandida Naina Andriantsitohaina fa hojerena akaiky ity olana ity ary hatao izay hampidirana ny mpivarotra rehetra eo amin’ny sehatry ny ara-dalàna.
Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nambarany fa hametrahana “Caméra de surveillance” avokoa ny toerana rehetra anjakan’ny sinto-mahery sy ny asan-jiolahy eto an-drenivohitra. Mila ampitomboina koa, hoy izy, ny isan’ny toeram-pivoahana ao Analakely sy ny manodidina hitandrovana mandrakariva ny fahadiovan’ny tanàna.